အွန်လိုင်းသီချင်းများကို မှတ်မိရန် ကိရိယာ ၅ ခု | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
အွန်လိုင်းသီချင်းများကို မှတ်မိရန် ကိရိယာ ၅ ခု
ဒန်နီရယ် Terrasa | 14/01/2022 20:38 | အစီအစဉ်များ
သေချာပေါက် အဲဒါက မင်းကို တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ကြုံဖူးတယ်- မင်းကြိုက်တဲ့သီချင်းကို မင်းကြားရတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါက ဘာနာမည်လဲ၊ ဘယ်သူဆိုတယ်ဆိုတာ မင်းမသိဘူး။ သူမကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် နည်းလမ်းမရှိပါ။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ နည်းပညာက ကယ်တင်ရာရောက်ပါတယ်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်ကိုအောင်မြင်ရန် ကူညီပေးမည့်ကိရိယာအချို့အကြောင်း လေ့လာသွားပါမည်။ အွန်လိုင်းသီချင်းများကိုမှတ်မိသည်။
ဤကိရိယာများသည် ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေနေသည့် သီချင်းကို ရှာဖွေနိုင်ပြီး ၎င်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် လိုအပ်သော အသေးစိတ်အချက်များ (အနုပညာရှင်၊ စာရေးဆရာ၊ ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ စသည်) အားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးဆောင်နိုင်သည် .
ဤအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့သည့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဆိုက်များစွာရှိပါသည်၊ ထို့ကြောင့်အစပိုင်းတွင်၎င်းသည် Google တွင်ရိုးရှင်းသောရှာဖွေမှုနှင့်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်လုံလောက်လိမ့်မည်ဟုထင်ရသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့အားလုံး မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်ကြသည်တော့ မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် သုံးစွဲသူအများစု၏ အမြင်အရ ကမ်းလှမ်းသည့်အရာများကို ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ရွေးချယ်ထားပါသည်။ အကောင်းဆုံးရလဒ်များကို:
အသုံးပြုသူများ တန်ဖိုးအရှိဆုံး အွန်လိုင်းတေးဂီတကို ဖော်ထုတ်ရန် ပလပ်ဖောင်း- Shazam
အွန်လိုင်းသီချင်းများကို မှတ်မိရန် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကျော်ကြားဆုံးနှင့် အသုံးအများဆုံး ကိရိယာဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ကျော်ကြားမှုသည် အခွင့်အလမ်း၏ ရလဒ်မဟုတ်၊ ၎င်းသည် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။ 1999 ခုနှစ်တွင် စတင်ရောင်းချခဲ့ပြီး၊ Shazam ၎င်း၏ ကဏ္ဍအတွင်း နံပါတ်တစ် နေရာကို ဆက်လက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရန် ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို အဆက်မပြတ် အပ်ဒိတ်လုပ်နေပါသည်။
ကတည်းက ပန်းသီးက ဝယ်တယ်။ 2017 ခုနှစ်မှစ၍ Shazam ကို ရွေးချယ်ထားသော iPhone၊ iPod Touch၊ Android၊ BlackBerry၊ iPad အပြင် Sony ဖုန်းအများစုနှင့် Windows Phone 8 အတွက် အခမဲ့ (သို့မဟုတ် အခမဲ့နီးပါး) အက်ပ်အဖြစ် ကမ်းလှမ်းထားပါသည်။
Shazam ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ ဤအပလီကေးရှင်းသည် သတ်မှတ်ထားသောအခိုက်အတန့်တွင်ဖွင့်နေသည့်ဂီတကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန် မိုဘိုင်းဖုန်းအများစုတွင် တည်ဆောက်ထားသည့် မိုက်ခရိုဖုန်းကို အသုံးပြုသည်။ နမူနာအနည်းငယ်သည် acoustic fingerprint ဖန်တီးရန် လုံလောက်သည်။ လက်ဗွေကို မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့် ကိုက်ညီမှုများအတွက် Shazam ၏ ကျယ်ပြန့်သောဒေတာဘေ့စ်ကို စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။ ရှာဖွေမှုသည် နောက်ဆုံးအချိန်အထိ အနည်းနှင့်အများ ကြာမြင့်နိုင်သည်… Bingo! ပွဲဖြစ်သောအခါ၊ ဥပမာ၊ သီချင်းခေါင်းစဉ်၊ အနုပညာရှင်၊ အယ်လ်ဘမ်နှင့် iTunes၊ YouTube သို့မဟုတ် Spotify သို့ လင့်ခ်များပင်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ထဲတွင် ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။
ဤအရာအားလုံးအတွက်၊ အွန်လိုင်းသီချင်းများကိုမှတ်မိရန် ရိုးရှင်းသောကိရိယာတစ်ခုထက်ပို၍ Shazam ကို ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ဂီတချစ်သူများအတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်။. သို့သော်၊ အံ့သြဖွယ်တိကျမှုဖြင့် ရုပ်ရှင်များနှင့် တီဗီရှိုးများကို မှတ်မိနိုင်သောကြောင့် ၎င်း၏အသုံးပြုမှုသည် ပို၍ကျယ်ပြန့်ပါသည်။ ဖုန်း၏မိုက်ခရိုဖုန်းကို အသံအရင်းအမြစ်နှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ယူဆောင်လာရန် လုံလောက်ပါသည်။
SounHound တွင် သင်ရှာနေသော သီချင်းကို သီဆိုပြီး ၎င်းကို တွေ့ရှိရန် ကူညီပေးပါမည်။
အသုံးပြုနည်း SoundHound တိကျတဲ့အခိုက်အတန့်မှာ ဖွင့်စရာမလိုဘဲ ကျွန်တော်တို့ရှာနေတဲ့ သီချင်းကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်စေတဲ့အတွက် တကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဤကိရိယာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသံမှတစ်ဆင့် တေးဂီတကို ရှာဖွေနိုင်သည်။ ဟုတ်တာပေါ့၊ သီချင်းဆိုဖို့ (ဒါမှမဟုတ် ဟမ်ပါ)၊ ရှာဖွေသူအား မရောထွေးစေရန်အတွက် နားရွက်အချို့ကို တီးခတ်ပေးသည်။
တစ်နည်းဆိုရသော်၊ ၎င်းသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် အသုံးဝင်သည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သော်လည်း လူတိုင်းအတွက် သင့်လျော်မည်မဟုတ်ပေ။ SoundHound သည် စစ်မှန်သော "musical hound" ဖြစ်သည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့သည် မေးခွန်းရှိထားသော သီချင်း၏ အပိုင်းအစတစ်ခုကို မှတ်မိနိုင်သော အပိုင်းတစ်ပိုင်းကို အနည်းဆုံး မသီဆိုနိုင်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ကို များစွာ အထောက်အကူ ပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
SoundHoud ကို Android နှင့် iOS အတွက် ရနိုင်သည် လုံးဝအခမဲ့. ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသောသီချင်းကို နောက်ဆုံးတွင်ဖော်ထုတ်သောအခါ၊ အပလီကေးရှင်းသည် ၎င်း၏အမည်၊ ဖြစ်နိုင်သည့် YouTube ဗီဒီယိုများ၊ သီချင်းစာသားအပြည့်အစုံကြည့်ရှုရန် လင့်ခ်တစ်ခုနှင့် အခြားအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြသမည်ဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းအပြင် desktop ဗားရှင်းလည်း ရှိသည်ကို သတိပြုသင့်သည်။
Lyrster... ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ တစ်ခါတစ်လေ သီချင်းတွေက သီချင်းထက် ပိုအရေးကြီးလို့
၎င်းသည် ဤစာရင်းရှိ အခြားကိရိယာများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲပြားသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသောမုဒ် Lyrster သီချင်းများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်မှာ ဂီတအပေါ်အခြေခံ၍မဟုတ်ဘဲ သီချင်းစာသားပေါ်တွင်ပါရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စကားစုတစ်ခု သို့မဟုတ် သီချင်း၏ သံပြိုင်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့် ကိစ္စများတွင် အလွန်လက်တွေ့ကျသည်။ ဒါမှ ကြိုးကို ဆွဲထုတ်ပြီး သီချင်းရှာနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ, Lyrster ဝဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်သောအခါတွင် သင်သည် သီချင်းစာသား၏ ကောက်နုတ်ချက်ကို ရေးသားနိုင်သည့် အကွက်တစ်ခု ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် "ငါ့သီချင်းကိုရှာပါ" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး သင့်လက်ချောင်းများကို ဖြတ်လိုက်ပါ။ Lyrster ၏ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည် သီချင်းစာသားများကို အထူးပြုသည့် ဝဘ်ဆိုဒ်ပေါင်း 450 ကျော်ကို ရှာဖွေမည်ဖြစ်သည်။ သဘာဝအားဖြင့်၊ အောင်မြင်နိုင်ခြေသည် ကျွန်ုပ်တို့သည် စာသားအပိုင်းအစကို အမှားအယွင်းမရှိ သို့မဟုတ် စာလုံးပေါင်းမှားခြင်းမရှိဘဲ ရေးနိုင်ခြင်းရှိမရှိအပေါ် မူတည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီရန်၊ Lyrster သည် ကျွန်ုပ်တို့အား စာကိုသေတ္တာတွင်ရေးသောအခါတွင် အကြံပြုချက်များစွာကို ပေးပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေမှုများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် ရိုးရှင်းသော အကြံပြုချက်အချို့ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးစွမ်းပါမည်။ ဒါကလည်း ပြောရမှာပဲ။ လုံးဝအခမဲ့ကိရိယာတစ်ခု မှတ်ပုံတင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကိုပင် မလိုအပ်တော့ပါ။
Midomi - များစွာသောသူတို့အတွက်၊ Shazam အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ
အသုံးပြုသူတော်တော်များများက အဲဒါကို စဉ်းစားကြပါတယ်။ မီဒိုမီ ယနေ့ခေတ်တွင်ရှိသော Shazam ၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင်၊ ၎င်းသည် Shazam နှင့် SoundHound ပေးဆောင်သော အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် အရင်းအမြစ်များကို ဖုန်း၏မိုက်ခရိုဖုန်းမှတစ်ဆင့်သာမက ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အသံမှတစ်ဆင့် အွန်လိုင်းတွင်ပါ သီချင်းများကို မှတ်မိနိုင်သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် အနိမ့်ဆုံးဖြင့် သီဆိုနိုင်လျှင် ၎င်းသည် ထိရောက်သောပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်း မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ၊ Midomi သည် ကျွန်ုပ်တို့သိရှိလိုသော ဂီတကို ရှာမတွေ့မချင်း ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်စပ်အသေးစိတ်စာရင်းရှည်ဖြင့် ရလဒ်များကို ပေးဆောင်ပါမည်- သီချင်းအမည်၊ သီချင်းစာသား၊ အမျိုးအစားနှင့် အနုပညာရှင်၊ ထွက်ရှိသည့်နှစ်... အားလုံးထဲတွင် စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှသာ။
သီချင်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အပြင်၊ Midomi လည်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ဂီတဝါသနာရှင်များအတွက် တွေ့ဆုံမှုတစ်ခု. ၎င်း၏အသုံးပြုသူအသိုင်းအဝိုင်းသည် တစ်ဦးချင်းပံ့ပိုးမှုများကြောင့် ၎င်း၏ဒေတာဘေ့စ်ကို ချဲ့ထွင်ရန် အဆက်မပြတ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။
ACRCloud မှတစ်ဆင့် ဂီတကို အွန်လိုင်းတွင် အသိအမှတ်ပြုပါ။
စာရင်းတွင် ပဉ္စမမြောက်အမည်သည် မကြာသေးမီကာလများအတွင်း လူသိများထင်ရှားလာခဲ့ပြီး၊ ကျေးဇူးကြောင့် ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ Xiaomi နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ သဘောတူညီချက် ဖြစ်ပါတယ်။။ ဒါပါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ၎င်း၏အတိုကောက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သော်လည်းကောင်း တရုတ်နိုင်ငံမှ ဆင်းသက်လာပါသည် (ACR ဟုဆိုလိုသည်။ အလိုအလျောက်အကြောင်းအရာအသိအမှတ်ပြုသို့မဟုတ် အလိုအလျောက် အကြောင်းအရာ အသိအမှတ်ပြုခြင်း)။ အဲဒါက ဂီတကို အံ့ဩစရာဖြစ်နိုင်စေမယ့် ဂီတအသိအမှတ်ပြုမှုနည်းပညာလို့ အတိအကျပါပဲ။
ဒီပလက်ဖောင်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ တေးဂီတအပုဒ်ပေါင်း သန်း ၄၀ ကျော်က ကျွေးမွေးတဲ့ ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခု. အခြားအလားတူကိရိယာများကဲ့သို့ပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးခေါင်းအနီးတွင်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့မခွဲခြားနိုင်သောသီချင်းကိုရှာဖွေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာကို အသံရင်းမြစ်နှင့် ပိုမိုနီးကပ်စေရန် ACRCloud မှသိရှိနိုင်စေရန် ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်များ။
ဤအဓိကရွေးချယ်စရာငါးခုအပြင်၊ အွန်လိုင်းသီချင်းများကိုမှတ်မိရန်သေချာပေါက်အသုံးဝင်နိုင်သောအခြားအချို့ကိုဖော်ပြရကျိုးနပ်သည်။ AudioTag၊ MusixMatch၊ Name my Tune၊ Qiiqoo၊ Watzasong၊ နာမည်ကြီးဖော်မြူလာအပြင် OK Google သို့မဟုတ် Siri၊ သူတို့ထဲကတချို့ရှိနေပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အစီအစဉ်များ » အွန်လိုင်းသီချင်းများကို မှတ်မိရန် ကိရိယာ ၅ ခု
Xiaomi နှင့် Poco မိုဘိုင်းလ်များအတွက် စိတ်ဝင်တစား လျှော့စျေးများကို အချိန်အကန့်အသတ်အတွင်း
အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် WiFi ချန်နယ်- ကွာခြားချက်များကား အဘယ်နည်း။